‘महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न तयार’ कार्यान्वयन भए के हुन्छ ? « News24 : Premium News Channel
‘महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न तयार’ कार्यान्वयन भए के हुन्छ ?
कञ्चनपुर । सिँचाइ मन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत टनकपुर बाँधदेखि नेपालको सीमानासम्मको एक हजार २०० मिटर नहर बनाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिएको बताउनुभएको छ ।
हिजो टनकपुर बाँधको निरीक्षण गर्दै मन्त्री गौतमले २२ वर्ष अगाडि भएको महाकाली सन्धिअनुसार गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।
महाकाली सन्धिको धारा २ अनुसार टनकपुरमा पूर्वी एफलक्स बाँध निर्माण गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गरेको बदलामा नेपालले ३०० क्युसेक पानी सुख्खायाममा र एक हजार क्युसेक पानी वर्षायाममा प्राप्त गर्ने कुुरा उल्लेख गरिएको भए पनि प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पञ्चेश्वर परियोजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन भारत सरकारसँग सहमति भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले पञ्चेश्वरबाट थप भएको पानी उपयोग गर्ने गरी नहरको संचरना निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।
आजै मन्त्री गौतमले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो तथा जनता तटबन्ध कार्यालयले गरेका कामको पनि निरीक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेलामा निर्माण भइरहेको बाँध र मोहना सिँचाइ आयोजनाको समेत निरीक्षण गर्दै छिटो काम गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । निरीक्षणका दौरानमा निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि छिटो बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।